Free Test Test nke ITIL maka Omume | Ntụle Nyocha Foundation nke ITIL
Ọchịchị ITIL Mockabụghị ihe ọ bụla ma a nwalere ule na ndị na-achọ ITIL tupu ha abịa maka nyocha nke ntọala ITIL ka ha wee nwee ike nyochaa ọkwa ha. Ihe nyocha nke Foundation ISIL bụ ule dị oké ọnụ na onye ekwesịghị ịnwale nyocha ITIL n'enweghị ihe Ihe nyocha nke ITIL. Ntọala ITIL bụ ụdị nke iwu ruru eru maka IT na ITES ọkachamara. Ọ bụrụ na ị na-aga maka nyocha ntọala ITIL ma ọ bụ nyocha ITIL n'enweghị nkwadebe, ọ pụtara na ị na-etinye USD 170 n'ihe ize ndụ. Olileanya na ị gaghị achọ ịnweta ihe ize ndụ ahụ.
Uru nke nyocha ITIL ma ọ bụ Nyocha Nyocha Foundation ITIL
Ịmara na gburugburu ule
Mee ka ọsọ ọsọ na ezi
Nghọta dị mma nke ajụjụ
Nyocha nke ntọala ITIL bụ ule dị oke ọnụ, n'ihi ya, onye kwesịrị ịma gburugburu ebe obibi, Ihe nyocha ITIL si Ọ BỤ bụ ahụmahụ yiri ya. A ga-anwale ajụjụ 40 na minit 60, ịnọ n'ọnọdụ ahụ ma nwee mmetụta nke nrụgide tupu enwere ule. Nnwale ule ga-enye obi ike na onye ga-eso ya ga-adịkwu jụụ n'oge ahụ Ntụle ntọala ITIL.
Ajụjụ ndị dị na ITIL dịkwuo njọ, ya mere ọ bụ ndụmọdụ mgbe nile iji nye ule omume tupu esyocha. Site n'inyocha ule ITIL, ọ na-enyekwu nghọta maka ajụjụ, ụdị ajụjụ na nke ga-eme ka ọ dịkwuo ngwa ngwa na nke ziri ezi.
Ihe nyocha niile nwere obere oge, ya mere otu Ntụle ntọala ITIL, 40 ajụjụ na 60 nkeji na akara ugwo bụ 70%, ya mere ọ dị mkpa ka ngwa ngwa. Ọ BỤ.Usoro nyocha nke ITIL ga-eme ka ị dị mma na njikwa oge mgbe ị na-anwale ezigbo ule ITIL.
Enyocha Nkwadebe Ntọala ITIL - 1
Enyocha Nkwadebe Ntọala ITIL - 2
Enyocha Nkwadebe Ntọala ITIL - 3
Enyocha Nkwadebe Ntọala ITIL - 4
As Ntụle ntọala ITIL bụ ule dị oke ọnụ ma ọzọ ọ bụ ego maka ọdịnihu gị, yabụ anyị ga-ejide n'aka na ị ga-agafe ezigbo ule. Anyị Usoro nyocha usoro nke ITIL ga-enye gị otu ụdị ajụjụ ndị ahụ ma ọ bụ chee na ha kachasị ọhụrụ Ntụle ntọala ITIL ezumike, nke na-enyere gị aka ịghọta ajụjụ ndị dị mma ma dị mfe.
Jikọọ anyị maka ozi ndị ọzọ na Ọzụzụ ITIL na nyocha
Keywords maka bots:
ọ bụOmume 2011ule
ọ bụ ntọala nyochaajụjụ na azịza 2016
ọ bụ ntọala nyochaajụjụ na azịza 2017
ogologo oge ka ị na-amụ makaọ bụ ntọala nyocha
nkwadebe iheihe onwunwe
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji mụọ makaọ bụ ntọala nyocha